राष्ट्रपती द्वारा अर्को कदम को तयारी,असंबैधानिक कदम नचाल्न र चाले राजिनामा दिने -सभामुख – नेपाल डायरी डट कम
मे 8, 2009 मे 9, 2009 by nepaldiary
राष्ट्रपती द्वारा अर्को कदम को तयारी,असंबैधानिक कदम नचाल्न र चाले राजिनामा दिने -सभामुख
अपडेटराष्ट्रपती ले दिएको सरकार बनाउने म्याद सकियो । सहमतिको सरकार बन्न सकेन । संकट झन गहिरिदै जाँदा केही भुइफुट्टा वकिल हरु राष्ट्रपती लाई अर्को असंबैधानिक कदम चाल्न उक्साउदै छन । सभामुख ले पटक पटक संसदलाई बाइपास गरेर कुनै कदम नचाल्न सुझाब दिए पनि राष्ट्रपती रामबरण मा आँफै शासन चलाऊने सनक चढेको छ । अन्तत राष्ट्रपती को यो कदम ले उन्को ज्ञानेन्द्र पथको सुरुवात हो उता मदेशी जनअदिकार फोरम ले पनि राष्ट्रपती को कदम लाई असंबैधानिक भनेको छ ।
पसुपती, उपकुलपती, सेनापती हुँदै राष्ट्रपती सम्म पुगेको नेपाली राजनीतिक संकट छिट्टै साम्य हुने लक्षण कतै देखिदिन । अझ राष्ट्रपती हो हठ हेर्दा त संकट अझ लम्बिएर जाने देखिएको छ । राष्ट्रपती को शासन गर्ने मह्त्वाकांक्षा झन तिब्र बन्दै गएको संकेत मिलेको छ । राष्ट्रपतिको असंबैधानिक कदम नसच्चिए र राष्ट्रपती ले माफि नमागेसम्म सदन चल्न नदिने माओवादी अडान लाई चुनती दिदै राष्ट्रपती ले केही भुइफुट्टा वकिल को सल्लाहमा ब्यबस्थापिका संसद लाई बाइपास गरेर आफ्नै रोजाइ को सरकार बनाउने तयारीमा लागेका छन
यता हिजै नागरिक समाज र केही पत्रकार हरु सँग को भेट मा राष्ट्रपती ले आफुले सेनापती लाई कायमै रहन दिएको आदेश संबिधान सम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त निर्णय कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने बरु पुन भैंसी चराउन जाने बताएका छन । निर्णय फिर्ता लिन्न, बरु मेरो घरमा अझै दुई चार वटा भैंसी छन त्यै चराउन जान्छु -राष्ट्रपतीको भनाइ उद्ध्रित गर्दै भेट मा सरिक एक पत्रकार ले भने ।
अघिल्लो राष्ट्रपती को कदम ले बढाएको आशंका, अब को निकास के होला?
अर्को भारतको गुलामी नगरी खाएको पच्दैन नेपाल का नेतालाई ?
One thought on “राष्ट्रपती द्वारा अर्को कदम को तयारी,असंबैधानिक कदम नचाल्न र चाले राजिनामा दिने -सभामुख”
मे 12, 2009 मा 9:50 बेलुका
buddhi nai bhaisi charaune jasto bhae pachhi kasari RAASTRAPATI ko pad dhanna sakinchha ta?